News - လေဆာဖြတ်စက်များ၏အမှားများနှင့်ကုသနည်းများမှာအဘယ်နည်း။
a ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ လေဆာဖြတ်စက်, ကြာရှည်စွာစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုအချိန်, ဖုန်ထူအလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အော်ပရေတာများ၏အရည်အသွေးနိမ့်ကြောင့်ပြproblemsနာများမကြာခဏပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သာမန်ပြproblemsနာအချို့ရှိလျှင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
ပထမ၊ ပုံမှန် startup အတွက်ပရိုဂရမ်မရှိပါ။
ပြတ်ရွေ့စွမ်းဆောင်ရည် - အဓိကပါဝါခလုတ်အချက်ပြမီးသည်ပိတ်ထားသည်၊ အဓိကဘုတ်၏ညွှန်ပြမီးပိတ်ထားသည်၊ panel ကမပြပါ၊ မော်တာ drive ညွှန်ပြမီးသည်ပိတ်ပြီးစက်ထဲ၌အသံမြည်သံထွက်လာသည်။
ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်း - ဖြေရှင်းချက်။ အဓိက power supply ၏အဆက်အသွယ်ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ DC power supply ပျက်စီးခြင်း၊ control panel ပျက်ကွက်ခြင်း၊ motor drive ပျက်ကွက်ခြင်း၊ စက်ပျက်ခြင်း။ အော်ပရေတာက၎င်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
၁။ စက်ပေါ်ရှိအချက်ပြမီးများကိုကြည့်ရှု။ စက်အမှားတည်နေရာကိုကြည့်ပါ၊ အဓိကပါဝါခလုတ်ညွှန်ပြချက်မီးမထွန်းပါ။ control panel ကမပြပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ DC 5V ကိုစစ်ဆေးပါ၊ ၃.၃V power output သည်ပုံမှန်ဖြစ်ပါသလား။ motor driver အချက်ပြမီးသည်ပိတ်ထားသလား။ ? ပါဝါ output ကိုပုံမှန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် power supply ပုံမှန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါက power supply သို့မဟုတ် power supply အစိတ်အပိုင်းမှားယွင်းမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် power output လိုင်းတစ်ခုခုကို ဖြတ်၍ စစ်ဆေးပါ။
2. အားလုံးပြသမှုပုံမှန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ရှင်းလင်းသောအသံတစ်ခုကိုသင်ကြားနိုင်ပါက၎င်းသည်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းနှင့်ရောင်ခြည်ကိုလက်ဖြင့်တွန်းသလားစစ်ဆေးပါ။ အတားအဆီးတွေရှိမရှိချောမွေ့။ အဲဒါကိုတားဆီးတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိလားဆိုတာကြည့်ပါ။
၃။ မော်တာရိုးတံခွဲခြားထားခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ဘီးမြဲမြည်နေလားစစ်ဆေးပါ။
၄။ drive block (plug) ၏ plug နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော main board၊ power supply၊ ဝါယာကြိုးများသို့မဟုတ် plug များအားကောင်းမွန်သောအဆက်အသွယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
၅။ drive block (drive) မှ motor သို့ဝါယာကြိုးအဆက်ပြတ်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အဓိကဘုတ်အဖွဲ့မှဘုတ်အဖွဲ့ငယ်သို့ ၁၈-core ဝါယာကြိုးပျက်စီးသွားသည်။ ထည့်သွင်းရန်ရှိမရှိ။
6. parameter သည် settings ကိုမှန်ကန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဘယ်ဘက်ရှိ parameters များသည်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သူတို့ကွဲပြားပါက၎င်းတို့အားအမှားပြင်ပြီးစက်ထဲသို့ရေးရမည်။
၂။ panel ပေါ်တွင် display မရှိပါ၊ ခလုတ်ကို activate လုပ်လို့မရပါ။
ပြubleနာဖြစ်ရပ်ဆန်း - အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ boot panel မှာ display မရှိဘူး၊ သော့တွေကချွတ်ယွင်းနေတယ် (သို့) မမှန်ကန်ဘူး။
ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်း - display control module ၏ power supply သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့် connection connection မကောင်းဘူး၊ panel ကပျက်နေတယ်။
၁။ ရောင်ခြည်နှင့်တွန်းလှည်းအားပုံမှန်ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်စက်ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ မည်သည့်အစီအမံမျှမလုပ်ရ၊ အစမှအစပြတ်ရွေ့ကိုဖြေရှင်းရန်မည်သည့်အစီအမံမှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
၂။ Power-on reset ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစက် panel ပေါ်ရှိမြားခလုတ်များနှင့် function key များကို နှိပ်၍ ပုံမှန်ဖြစ်မဖြစ်၊ ဤသော့များသည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်နိုင်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်။
၃. Connection indikator ပေါ်ရှိ socket နှင့် connector ကိုမထိပဲမထိပဲစစ်ဆေးပါ။
၄။ Display control block ကိုအစားထိုးလိုက်ပါ။ ပြသမှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးပါ၊ control block ပေါ်ရှိအညွှန်းသည်မီးလင်းနေလား၊
၅။ Data cable ကိုအစားထိုးပါ။ Main board သည် P5 အားသက်သလား၊ ဗို့အား 5V ဟုတ်လားတိုင်းတာသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပါက 5V power supply ၏ output ကိုစစ်ဆေးပါ။ output မရှိပါက 5V power supply သို့ပြောင်းပါ။
၆. အကယ်၍ ဖန်သားပြင်တစ်ခုရှိသော်လည်းခလုတ်များအလုပ်မလုပ်ပါကသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ရှိမရှိကြည့်ရန်ခလုပ်ရုပ်ရှင်ကိုအစားထိုးပါ။
၇။ အလုပ်မလုပ်သေးလျှင်စမ်းသပ်ရန် Motherboard ကိုသာအစားထိုးပါ။